Haddii aad leedahay macOS server, cusbooneysiintaadu si dhakhso leh ayey ula socon doontaa macOS High Sierra | Waxaan ka socdaa mac
server macOS Waa codsi laga helay Mac Apple Store. Marka la soo koobo, waxay noo ogolaaneysaa inaan u bedelno Mac-geena si aan u wadaagno waxyaabaha ku jira shabakad. Waa codsi la bixiyay, oo qiimahiisu yahay .21,99 XNUMX dukaanka Apple, laakiin waxay ku habboon tahay maaraynta xogta u dhexeysa aaladaha. Laga soo bilaabo cusbooneysiinta macOS High Sierra, waxaan haynaa hawl cusub oo naga hor istaageysa inaan soo dejino daraasiin GB ah, mid kasta oo ka mid ah aaladaha. Hawlgalku wuxuu noqon doonaa mid lagu soo dejinayo nooc ka mid ah nidaamka qalliinka, ka dibna loo qaybiyo dhammaan Mac-yada. wadaag kaydinta keydka.
Intaa waxaa dheer, ragga ka socda Cupertino waxay ku nadiifiyeen hawlgalka qaabka dhabta ah ee Apple. Maamulaha shabakadu waa inuu ku soo dejiyaa feylka cusbooneysiinta, laakiin inta kale ee isticmaala ma ogaanayaan wax isbeddel ah. Taasi waa, sidii caadiga ahayd, waxay aadi doonaan Apple Store oo soo iibsan doonaan, tusaale ahaan, macOS High Sierra. Farqiga u dhexeeya wuxuu ku saleysan yahay xaqiiqda ah, halkii laga soo dejin lahaa server-yada Apple, in macluumaadka laga helo nooca horay loo soo dejiyey.
Waxaas oo dhami waa suurtagal mahadnaqa muuqaalka cusub ee wadaagga kaydka, kaas oo aan ka helnay macOS High Sierra. Si loo helo goobaha, waa inaan:
Tag nidaamka doorbidida.
Hadda xulo La wadaag.
Xulashada ugu dambeysa ee ku taal liiska dhanka bidix waa Kaydinta khasnadda.
Asal ahaan, waa naafo ah. calaamadeynta laba jibbaarane waxay shaqeysaa shaqada.
Shaqadan, waxaan kula wadaagi karnaa nooca la soo dejiyey ee nidaamka hawlgalka, laakiin sidoo kale waxyaabo badan oo dheeraad ah, si aan uga helno shabakadeena maxalliga ah. Gaar ah:
ka Cusbooneysiinta iTunes.
ka iibsashada laga sameeyay iBook Store (xulashada ugu fiican ee buugaagta ama qoraalka)
ka Iibsashada abka ee Mac Apple Store.
Kaydka xogta ee iCloud, sawirro iyo dukumiinti labadaba.
Ugu dambeyntiina, haddii aad dhibaatooyin ku qabtid booska ay dhammaan macluumaadkaani ku fadhiyaan xusuustaada, waad habeyn kartaa booska ugu sarreeya. Sidan oo kale, waxyaabaha ugu da'da weyn waa la tirtiri doonaa. Waxa kale oo aad dooran kartaa darawal dibadeed si aad u keydiso macluumaadka aad wadaagto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Haddii aad leedahay macOS server, cusbooneysiintaadu si dhakhso leh ayey ula socon doontaa macOS High Sierra
Codsiga rasmiga ah ee Twitter ayaa ka baaba'ay Apple Watch
TV-ga cusub ee Amazon Fire TV wuxuu taageeraa 4k nuxurkiisa wuxuuna ku kacayaa wax ka yar kala bar Apple TV